Shiinaha Qabanqaabiyaha Bamboo Jumlaha Qabanqaabiyaha (7-9 boosaska) Bamboo Ballaaranaya Maacuunta Weelasha Qabanqaabiyaha Qummanka Bamboo loogu talagalay Gooyo, Flatware, Silverware - Kala-qaybiyeyaasha Kala-Bixiyeyaasha Warshad Kaydinta Fudud iyo Soo-saareyaasha | Qaabka Buundada
Abaabulaha Qasabadda Bamboo Jumlada ah (7-9 boosaska) Bamboo Fidinta Qalabka Weelka Qasabadaha Qabanqaabiyaha Qumman Bamboo loogu talagalay Gooyo, Flatware, Silverware - Kala-qaybiyeyaasha Kala-Bixiyeyaasha ee Kaydinta Fudud
Shayga Maya: KB003
Bamboo weyn oo Abaabulaha Abaabulaha ah: Khaanad Lacageed oo ballaadhan oo loogu talagalay ballaadhinta saxanka qalinka ee khaanadda ayaa kuu oggolaanaysa inaad si buuxda u abaabusho weelasha jikadaada khaanad kasta. Naqshad ballaarin ah oo fidsan 13 "illaa 20" ballaaran
Naqshad hagaajin leh: Qabanqaabiyaha khaanadda weyn ayaa la ballaarin karaa laga bilaabo 7 illaa 9 qaybood. Wuxuu ku siinayaa booska dheeriga ah haddii aad ugu baahan tahay mindiyo, gogo ', iyo weelal kale oo lacag ah.
Waxyaabaha Bamboo Dabiiciga ah: Si qurux badan ayaa loogu qaabeeyey walxo bamboo dabiici ah oo loogu talagalay qaanso dhaadheer oo waara. Qabanqaabiyaha khaanadda jikada waa mid u adkeysata biyaha wuxuuna si fudud ugu tirtiri karaa maro qoyan
Abaabul Jikadaada: Loogu talagalay si dhammaystiran inay ugu habboon tahay dhammaan baahiyahaaga jikada. Wanaagsan tahay maacuuntaada, qalabka guryaha, qalabka qalinka, qalabka wax lagu karsado, iyo maacuunta kale ee waaweyn ee jikada sida malqacadaha, spatulas, scoopers, iyo kuwo kaloo badan, sidoo kale waxay ku fiican yihiin keydinta xafiiska & ururada.
Aad u Waara: Naqshad adag oo leh farsamo yaqaan khibrad leh ayaa xaqiijineysa in saxaaraddan la jeexayo ee alwaaxa aysan waligeed burburin doonin ama dillaacin. Si fudud ayey ugu habboonaanayaan khaanadaha jikada badankood. Haddii aad wax arrimo ah qabtid, fadlan nala soo xiriir isla markiiba!
Nolol midab leh: Style Bridge wuxuu bixiyaa rinjiyeyn midab leh, qaasatan kufiican Brown, Black, Gray paint paint, Kuwani waa midabada ugu caansan suuqa.
Hore: Qabanqaabiyaha Jumlada Qalabka Jumlada Qalabka, Bamboo Silverware Tray for Drawer, Qabanqaabiyaha Qabanqaabiyaha, Flatware Drawer Holder Medium, Qabanqaabiyaasha Keydinta Miiska Xawaaladda ee Wood, Qaanadda Khaanadda
Xiga: Qabanqaabiyaha Qasabadaha Qumbuyuutarka Qumbuyuutarka Qumbaha, Qasabadaha Qaybiye Qalinka Qabanqaabiyaha maacuunta qalabka wax lagu gooyo - 5 Qaybo oo leh rinji Gray
Miisaanka 1.8kg / 4pounds
Macluumaadka CTN 6pcs / ctn
Naqshadeynta astaanta bilaashka ah
Xardho astaan ​​bilaash ah